Vacuum cleaner omkhathi ziye zasetshenziswa iminyaka engaphezu kuka-100 edlule kulelikhaya. Ngokuhamba kwesikhathi, kukhona onobuhle ezingasho eziphambili zedivayisi. Abaklami nabasunguli bezinto ngesikhathi ekhuphuka kanye indlela yokuthuthukisa Ergonomics namandla. Kuze kube manje, phezulu okudaliwe yabo baba wezindlu irobhothi, cishe ayidingi Ukungenela komuntu. Kodwa isandla "izilo 'okuhle esidala ngeke eside uqhubeka ukuba angafuna besifazane bese uqinisekisa lokhu Izibuyekezo zabo eziningi. Samsung SC6573 cleaner wezindlu baba hero sihloko lanamuhla.
Ukucaciswa kobuchwepheshe kanye jikelele
Idivayisi ine ezibekiweko elandelayo lobuchwepheshe kanye jikelele:
Ikhono ukushintshela igijimisa isibambo.
Amandla Samsung sc6573 - 1800W.
Ukuba khona Turbo ibhulashi.
Hlunga - HEPA 11.
Kube premotor zokuhlunga.
umsindo Made - 80 dB.
Inani eliphelele uthuli kule esitsheni - 1.5 amalitha.
Steel isibambo, telescopic.
Uhlelo uthuli iqoqo - nesiphepho. Umbhedo icindezelwa esitsheni esobala.
Ikhishwa umsindo cleaner wezindlu kuqhathaniswa ongaphakeme. Inkomba kulencane inama-vacuum cleaner "Electrolux» Silencer Ultra - 71 dB (umsindo ezingeni ifaniswe inkulumo evamile).
SC6573 cleaner wezindlu yiyona Samsung (1800W amandla ukusetshenziswa) uyakwazi kalula ukuncela nothuli, izinwele, izinwele isilwane imfucumfucu izinhlayiya ezinkulu ngamandla 380 Watts.
Premotor ukuhlunga isiponji polyurethane foam. Kufanele kube izikhathi eziningana ngenyanga ukugeza. Ngeke wawoma heater kanye ilanga, ngakho ungalahlekelwa nezici zabo.
Uthuli isikhwama cleaner wezindlu Samsung SC6573 abuzange. Kunalokho, it has a isitsha okungukuthi elula futhi kunengqondo. Engingakusho emva ngamunye wokuhlanza onomfutho nokujikijela uthuli bese uhlanza it.
Engagqwali telescopic tube kalula kwaphoqa usayizi oyifunayo.
Ukubukeka vacuum cleaner nokuhlanganiswa
Yakhelwe ngokuhambisana izitayela fashion. amasondo zenjoloba ezinkulu ukuqinisekisa ukunyakaza abushelelezi efulethini futhi musa ilimaze flooring. Samsung SC6573 ine LED ukuthi ikhanyisa lapho ukugcwalisa isikhwama uthuli. Ngaphezu kwalokho, ikhithi zingatholakala amathiphu ezinhlanu:
flooring futhi umata;
umbala umzimba - abomvu metallic. SC6573 cleaner wezindlu has a ukuphakama - 282 mm ububanzi - 252 mm. Idivayisi ukala mayelana 5 kg. Gcina vacuum cleaner kungaba kokubili izikhundla mpo futhi enezingqimba. Intambo ubude 6 amamitha zamatyvaetsya emzimbeni indiza ngokuzenzakalela uma ucindezela inkinobho enkulu, ilingana nobubanzi zedivayisi. Turbo ibhulashi udinga ukuqoqa izinwele futhi isilwane izinwele.
Hoover Samsung SC6573: HEPA 11 isihlungi
amazwi Specific ifanelwe ekhethekile lemifanekiso for Samsung cleaner wezindlu. kakhulu Isifushaniso esithi imele Efficiency High Particulate Ukudla, okuyinto elihunyushwe English lisho "umphumela high in the nokugcinwa izinhlayiya." Kunconywa ukuthenga ukuhlunga okusha njalo eminyakeni 1.5-2.
I-apharathasi uyakwazi ukubambezeleka izinhlayiya emihle futhi sihamba kubo Abuyela endlini emuva kwezikhathi. Ngokuvamile lapho omubi ukuncela ngokwanele ukuhlanza lemifanekiso - futhi vacuum cleaner ngeke ulahleke amandla futhi.
Ngaphambi ukuhlanza lemifanekiso esuswa izindlu kuqala futhi ukukhiqiza zokuhlanza owomile ibhulashi elithambile. Khona-ke ngaphansi kwamanzi wageza egijima, kungcono kulokhu ukusebenzisa ibhulashi upende - ke uyakwazi engena ijule pleats. Antiallergic HEPA isihlungi onenkomba 11 uyakwazi esaziwa kuze kufinyelele 95% uthuli kwayo kuleyo ndawo yokuhweba. Kukhona amazinga ephakeme.
Samsung SC6573 cleaner wezindlu isihlungi has a grade HEPA 11 Isiliva Nano, kungaba ukushintshwa e imodeli ezithuthukisiwe nge-index 12 noma ngaphezulu.
SC6573 cleaner wezindlu nokubuyekezwa iloli umsebenzisi okulandelayo uthola.
Uma ngabe le divayisi ukususa imfucumfucu, wabe enenkinga amandla ukumuncwa. Kulokhu, izihlungi akakwazi ukubhekana nothuli. Esikhathini master yokulungisa ukuqaqa vacuum cleaner, ehlanzekile ebhodini, motor kanye nezezindlu. Sikhumbuza wena ukuthi kukhona izinto zokuhlanza ekhethekile nendlu lisebenze ukusetshenziswa uma ukulungisa izindawo zokwakha is hhayi Kunconywa.
Amandla ukulawula isibambo ugcwale uthuli ilahlekelwa umsebenzi walo. Isizathu futhi uku indlela ivaliwe. Udinga ukudlulisa kwawo bashaye uthuli.
double ukusatshalaliswa imfucuza limelela inqubo elandelayo: doti lokuqala uwela ekamelweni zangaphandle vortex komoya, futhi esinye isigaba (kwangaphakathi) uthuli wehlise umoya. Lolu hlelo igcina njalo amandla ukuncela futhi kuthuthukisa izinga lomsebenzi.
Lo engaba yokuhlanza, okubandakanya SC6573 cleaner wezindlu, kancane angaphezu kwangu-9 amamitha, ukuthi kwanele.
Ukuntuleka kokukhulumisana esikhundleni izikhwama uthuli kuyasiza wonge imali.
Izibuyekezo Samsung SC6573 cleaner wezindlu ihlukile, iningi lawo omuhle. Abasebenzisi like mayelana konke lisebenze kusukela design amahle yokuqedela omuhle kakhulu amandla ukuncela.
cleaner wezindlu design kufanelana ngokuphelele zingene iliphi igumbi. Ububi ukungabi umbala okukhethayo. Idivayisi uvezwa ithoni olulodwa - abomvu.
Usayizi compact vacuum cleaner uyayixazulula inkinga wesitoreji, iyunithi idluliswa kalula ngesikhatsi kokuhlinzwa. Omama bamakhaya efana lula lapho wokuhlanza, akudingeki ugoba ukuze ushintshe amandla: babe zokulawula ezidingekayo ku isibambo. Ukuhlehlisa intambo, vele uchofoze inkinobho big yonkana umzimba emincane vacuum. Amasondo ngobumnene ukuhambisa phansi futhi musa bhala le amapulangwe aphansi ezibizayo futhi laminate.
Amandla ikakhulukazi sithinta bonke abasebenzisi. Ngesilinganiso esiphezulu shayela neze iza off kusukela ukhaphethi. Imibhobho esemzimbeni Special ukuba sibhekane ngokuphumelelayo zonke izinhlobo udoti. Ezindaweni akude crevice umlomo wombhobho sucks uthuli kalula, isb, izikhala phakathi radiators.
SC6573 cleaner wezindlu has a ukuhlunga awukwazi miss zothuli ngu-95%. It is ngokushesha waqaphela ngabantu abangekho iguliswa othulini. Breathe ngemva kokuvuna, uma iqhathaniswa nezinye izihlungi, kuba lula kakhulu, nokungezwani komzimba nezinto azisenzeki.
Uhlelo uthuli iqoqo asinakubhuntsha ukujabulisa, ikakhulukazi amakhosikazi angasebenzi, ababesebenzisa ukusebenzisa lisebenze nezikhwama. Okuningi akudingekile kuphazamise abaqoqi uthuli emgwaqweni noma ekhaya emasakeni, ugeze bese ezomile - zonke udoti iguqulwe ibe zithutha encane. Bamane kudingeka asuswe futhi baxoshwa esitsheni.
Akukhona nje wathola nemibiko emihle evela vacuum cleaner Samsung SC6573. Asiqale nokwehluleka, nakuba ezinye iphutha ukukhuluma mayelana nokusebenzisa idivaysi nezinye izinjongo, isibonelo, phakathi yesondlo yokuhlanza doti.
It ahlahlele nge isikhathi emazombezombe uhlelo intambo. Abasebenzisi kufanele uphushe, ukudonsa intambo ngokucijile futhi bandaging emuva. Akuve onekhono ngempela kushabalalisa izinzwa noma yimuphi umuntu. Kodwa kufanele kuphawulwe ukuthi isifo likhona cishe zonke lezi izinto zokuhlanza cleaner.
Kubantu abane-endaweni iningi zokuhlala ubukhulu intambo akwanele. Kufanele ukuvala vacuum cleaner ukuba ibe esidayisa ezahlukene.
Ibange inkathazo Sebawoti isihlungi njalo yokuhlanza. Ngaphandle kwale nqubo, amandla ukuncela kuyehla.
Angiyithandi izinkinobho nabanikazi kudivayisi, esisogwini isibambo vacuum cleaner. Ngezinye izikhathi kungaba engaqondile agxishiwe ukushintsha amandla. Ngokwesibonelo, lapho wokuhlanza amakhethini ifenisha idinga isivinini esiphansi kanye kusenjalo usuke nto ukusivumela ipayipi.
Cleaner wezindlu Samsung SC6573: Imiyalelo kanye izinyathelo zokuphepha
Ngaphambi kokuba uqale ukuhlanzwa kunconywa ngijwayele imiyalelo yokusebenzisa kanye isenzo ngokuhambisana nezincomo kuwo.
Ungasebenzisi vacuum cleaner ku ezindaweni ezimanzi. Idivayisi ayenzelwanga ukumuncwa amanzi.
Nokuhlanza abakwazi ukuqoqa izinqamu zikagwayi, ukufana, izinto kanzima futhi abukhali.
Vala vacuum cleaner kungenzeka kuphela ngemuva ngokucindezela inkinobho yamandla, bese kamuva udonsa ipulaki.
Awukwazi ukushiya izingane ezingaphansi kweminyaka engu-8 kuphela zingagadiwe ne zazihlanganisa cleaner wezindlu.
Ethwele kuphela Sebenzisa ipeni, kodwa hhayi kwezinye izingxenye, ezifana hose noma intambo.
Esimeni ukuwohloka udinga ukuxhumana sesevisi ekhaya Imishini.
Ukuze wokuhlanza izibuya ayegcwele umlomo wombhobho esetshenziswa ngaphandle bristles, futhi phansi, Ngakolunye uhlangothi, ibenze turbonasadki inqwaba. Ukuhlanza kwesihenqo ukusetha amandla ukuba inani eliphansi.
Ngemva umsebenzi kuyadingeka ukuze asuse ngalendoda uthuli. Ukuze wenze lokhu, chofoza inkinobho esisogwini isitsha. Kunconywa ukuba ngokushesha agqoke isikhwama ithangi bese uthele okuqukethwe kulo. uthuli Ngakho kancane ungena ipheshana zokuphefumula.
Cleaner wezindlu Samsung SC6573, ekuhlaziyeni okuyinto okusesihlokweni esithi, elihlangabezana nazo zonke izimfuno yesimanje ukuze bahlanze izinga. Ubhekana uthuli isilwane dander. Idivayisi ifakwe isethi ezinhle Imibhobho esemzimbeni okwanele zonke izinhlobo igumbi ahlanzekile. Naphezu kwazo zonke lezo amaphutha amancane futhi impendulo engeyinhle, Samsung SC6573 cleaner wezindlu - kungcono a ehloniphekile yasendlini lisebenze, kokuba ilungelo kube kunoma iyiphi indlu noma ifulethi.
Siyaqonda ukuthi kungcono: a kubhayela double noma multivarka?
Ukubuyiselwa ithawula ukufudumala entsha
On aqaphe impilo yethu. imithi yesimanje izikelemu ukuze abantu
TP-LINK TL-WR841ND - ukubuyekezwa. TP-LINK TL-WR841ND (umzila): izici
Yini imibhalo kudingeka sokubhalisa isakhamuzi Russian
Ukulondolozwa kwamanzi angaphansi komhlaba. Ubani ohlola imithombo yamanzi angaphansi komhlaba?
Indlela overclock kwikhompyutha yakho?